रामेछापबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेहरु, कोको छन ? - ramechhapkhabar.com
रामेछापबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेहरु, कोको छन ?
१५ मंसिर रामेछाप।
नेकपा एमालेको दसौ महाधिवेशनबाट रामेछापका तीन जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । आज सम्पन्न महाधिवेशनमा औपचारिक घोषणामा एमालेका ३०१ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये रामेछापबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएका हुन् । महाधिवेशनबाट कैलाश ढुंगेल, माधव ढुंगेल र कमल चौलागाई केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
कैलाश ढुंगेल बागमती प्रदेशको भूगोलबाट, माधव ढुंगेले उपत्यकाबाट र कमल चौलागाई खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका हुन् । रामेछापबाट रत्न गौतम, प्रेम बहादुर लामा र माया कार्कीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको केन्द्रीय सदस्यको सूचिमा तीन जना भने पर्न सकेनन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका तीनै जना यसअघि केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई खेलाडीको मन जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । सदस्य सचिवको पदभार ग्रहण गरेपछि प्रचण्ड निवास पुगेका सदस्य सचिव घिसिङलाई बधाई दिदै प्रचण्डले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रचण्डले खेलकुद क्षेत्रका खेलाडीले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढनु पर्नेमा जोड दिए । प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले रामेछाप न्युजसँग भने,‘खेलाडीलाई उत्साहित बनाउने काम तत्काल अगाडि बढाउनुहोस, तत्काल गर्नुपर्ने काम र रणनीतिक रुपमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान गरेर अगाडि बढनुहोस ।’ नबाै‌ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीतलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिदै प्रचण्डले घिसिङलाई कार्यकामा स्मरणयोग्य काम गरेर देखाउन आग्रह गरे ।